September 2015 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 5:46 PM | No မှတ်ချက် |
ကိုဂျစ် - ဟယ်လို။
ကိုဂျစ် - အင်း။
ကိုဂျစ် - အင်း... ချစ်အရမ်းကြိုက်နေရင်လည်း ၀ယ်လိုက်လေ။
ဗီယက်နမ်က ကျောင်းဆရာတွေရဲ့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စာသင်နည်း
သူတို့ကျောင်းသားခလေးတွေ ကို တစ်ရက်ကို အိမ်စာ ၅ ခုလုပ်လာခိုင်းပါတယ်…
မေးခွန်းတွေက နေ့တိုင်းတူညီ နေပါတယ်…
၁. ဒီနေ့ သင်မိဘ ကို ဘာအိမ်အလုပ်တွေကူလုပ်ခဲ့သလဲ ?
၂. ဒီနေ့ သင်တစ်ပါးသူအပေါ်ဘယ်လို ကောင်းမှု့တွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့သလဲ ?
၃. သင့်အိမ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေ အကြောင်းပြောကြလဲ ?
တစ်လအတွင်း ဆံပင် ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ကြီးထွားမြန်စေမယ့် လျို့ဝှက်ချက်
Author: lubo601 | 5:37 PM | No မှတ်ချက် |
ဆံသားကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့အတွက် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ ပျိုမေတွေကို
အကြံပေးချင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တစ်မျိုး ညွှန်းနေကြတဲ့ အလှကုန်တွေကြား ဗျာမများ
ရအောင် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ပေးချင်ပါတယ်၊
(၁) ဆံကေသာအတွက် (curry leaves) ပျဉ်တော်သိမ်ရွက်ကို ကျိုရမယ့်အပိုင်းပါ၊
သင့်နာမည်လေးက A ..B..C..D.. စတဲ့ ဘာအက္ခရာလေးနဲ့ စပါသလဲ။
ဒီနည်းလေးအတိုင်း စစ်ကြည့်ပါ။ အရမ်းအရမ်းမှန်ပါတယ်။
သင်ရဲ. နာမည် မှာပါတဲ. ABCD အက္ခရာ လေးတွေကနေ သင့်ရဲ့ စရိုက် ကို ခန်.မှန်းနိုင်ပါတယ်။ မဆိုးဘူးနော်။ မှန်မမှန်သိချင်ရင် စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်လေ။ ကျွန်တော် တော့ စမ်းပြီးသွားလို့ မှန်တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ လုပ်နည်းက ဒီလို …….
Author: lubo601 | 5:27 PM | No မှတ်ချက် |
ရှော့စ် (Shock) ခဏခဏဖြစ်
သင်တန်းမတက်ဘဲ အွန်လိုင်းကနေ တတ်မြောက်နိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ . ၁ + ၂
သူ့အမေဈေးသွားနေလို့ အိမ်မှာ ကလေးထိမ်းနေရတယ်။
စကားပြောတတ်ကာစ ကလေးကို စကားသင်ပေးရတာပေါ့... ...
"မဟုတ်ဘူးလေ... ဖေဖေလို့ခေါ် ဖေဖေ"
၁ ။ မတရားသဖြင့် ခံရတဲ့အခါ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ပြုံးပါ။
၂ ။ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ဆန္ဒရှိရှိ ပြုံးပါ။
ဒါဟာ လူတွေကို ခွင့်လွတ်နားလည်ခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ့ ။
၃ ။ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်သာတဲ့ အခက်အခဲနဲ့ကြုံတဲ့အခါ ခပ်ယဲ့ယဲ့လေး ပြုံးပါ။
ဂရန်ဆိုတာ ဘာလဲ မသိတဲ့အပြင် ကြေးတိုင်နဲ့ မြေစာရင်းက ဂရန်ပေးတယ်လို့ ထင်နေသူတွေံ အများကြီး တွေ့နေရပါတယ်။ မြေစာရင်းက ဂရန်ပေးခွင့် မ၇ှိပါ။ တည်ဆဥပဒေများတွင် အာဏာ အပ်မထားပါ။ အ ကြောင်းတစ် ရပ်အတွက် သက်သေခံအဖြစ် ကူးပေးရတဲ့ သက်သေခံ မြေပုံ ၁၀၅ ကိုတောင် ဂရန်မှတ်နေတဲ့ သူက ၇ှိသေး...
အမေရိကန်နိုင်ငံသူဂျင်းဒစ်ကဆင် ဆိုတာသမ္ဗတကြီး ရုစဘဲ့ကိုယ်တိုင် တန်ဘိုးထားအားကိုးခဲ့သူဖြစ်တယ် သူဟောတာတွေဟာမှန်လွန်းလို့ တကမ္ဘာလုံးက ဗေဒင်ပညာရှင်တွေ စိတ်တန်ခိုးပညာရှင်တွေ ကမှအစ လေးစားတာကိုခံရသူဖြစ်တယ်။ ရုစဘဲ့ ထရူးမင်း အိုက်စင်ဟောင်ဝါ ကနေဒီဂျွန်ဆင် နစ်ကဆင် တို့ ၏ သမ္မတ အဆက်ဆက်အပြောင်း အလဲများ လုပ်ကြံခံရမည့်နေ့ ရက်များ ဒုံးပျံမလွှတ်မီက ပြောခဲ့သော ဒုံးပျံ၏ ပုံစံနှင့်လွှတ်တင်မည့်အခြေအနေတွေကို ဟောတာမှန်လွန်းလို့ တကမ္ဘာလုံးက အံ့သြကြရတယ်။
ကျမက မောင့် အတွက်ဆို အမြဲ အဆင်သင့်ပါ မောင်..
မောင် ဆန္ဒရှိရင် ကျမ အပေါက်မှာ အုပ်ထားတဲ့ အလွှာပါးလေးကို မောင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖောက်လိုက်ပါ မောင်..
ဖောက်ပြီးရင်တော့ မနက်စောစော တစ်ခါ.. ည အိပ်ခါနီး တစ်ခါ.. ပုံမှန်လေး သုံးပေးပါမောင်..
ဗုဒ္ဓဂယာ မြေမြတ်မဟာကား ဘုရားအဆူဆူတိုင်းတို့၏ ပွင်တော်မူရာ မြေမြတ်မဟာဖြစ်ပါသည်၊ သံဝေဇနိယ လေးဌာနတွင်ပါဝင်ပြီးဘုရားရှင်တိုင်းတို့၏ မစွန့်အပ်သော အဝိဇဟိတဌာနထူးလည်း ဖြစ်ပါသည်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် အထူးမွန်မြတ် အရေးပါသောနေရာတော်ဖြစ်သည်၊
ဘုရားရှင် သဗ္ဗညုတ္တရွှေဥာဏ်တော်ကိုရ၍ ဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသော ဒဿနိယ သံဝေဇနိယ နေရာတော်ဖြစ်သည်၊
“ ထာဝရ ဘုရားသခင်သည် အိမ်တိုင်းသို့ မရောက်နိုင်ရကား သူ၏ကိုယ်စား မိခင်များကို အိမ်တိုင်း ၌ ဖန်ဆင်းတော်မူ၏”
ငယ်စဉ်က ဆရာချစ်စံဝင်း၏ အမေနှင့် အမေ့အကြောင်း စာအုပ်လေး ဖတ်ဖူးသည်။ ထိုစဉ်တုန်းက အသက်အရွယ်၏ အသိဥာဏ် နှင့် ဖတ်ခဲ့ရသော ရသကား ယခု အသက်အရွယ်ရောက်ချိန်တွင် ပြန်ဖတ်ရသော ရသ နှင့် မတူတော့။
* အိမ်ထောင် တစ်ခု၏ ရေရှည်တည်တံ့ခြင်းအတွက် ( မယား ) ကောင်းတစ်ယောက်ပီသပါရဲ့လား
အိမ်ထောင်ရှင် မိန်းမသားမှန်သမျှသည် ယောကျာ်းများထက် များစွာပင် မိမိ၏ အိမ်ထောင်ရေးကိုတည်တံ့
ခိုင်မြဲချင်သူ များပင် ဖြစ်ကြလေသည် ။
လင် နှင့် မယား ကံအားလျော်စွာ လမ်းခွဲရခြင်း အကြောင်းများစွာတွင် မိန်းမသားတို့သည် မိမိတို့၏
အပြစ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်တတ်ခြင်း မရှိကြသူတွေ များပေ၏ ။
အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် ဈေးသွားရင်း လမ်းမှာတွေ့ လို့ရပ်ပြီး စကားပြောနေကြတယ်..။
" အိမ်ငှားခပေးရမဲ့ပိုက်ဆံတွေ ညည်း ချဲထိုးပစ်လိုက်တယ်ဆို...အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့အဆင်ပြေသွားတာလဲ "
" အိမ်ရှင်လူပျိုကြီးက အိမ်လခတစ်လ မပေးနိုင်ရင် သူနဲ့ တစ်ည အိပ်ရမယ်တဲ့"
Saw Noi Nay Saing - Putao with Thet Hlaing and 8 others
ဒီဆေးနည်းဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူသိများခဲ့တဲ့ လက်တွေ့နည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံကို သွားရောက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူကြီးမင်းဆိုတဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ပိုင်ရှင်ဟာ သံဂဟေဆက်တဲ့အလုပ်ကို နှစ်အကြာကြီး လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ အသောက်အစားမရှိ၊ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းမရှိပါပဲ ပူအိုက်တဲ့အတွက် အင်္ကျီချွတ်၍နေခြင်း၊ ပန်ကာဖွင့်အိပ်ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် တစ်နေ့မှာ ရုတ်တရက်ခြေထောက်တစ်ခြမ်း လေဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
"ထူးအိမ်သင်" နာရီပေါ်မှမျက်ရည်စက်များ (Cover) Snow-Manger
••• ကံဆိုး ကံကောင်းသူ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသူ အိမ်အကူအစ်မကြီး •••
သူမဟာ ကံမကောင်းချင်တော့ မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ အိမ်အကူတစ်ယောက်အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတာ လက်ရှိအလုပ်ရှင်ထံမှာ ၁၄ နှစ်တောင် ရှိနေပါပြီ။ သူမဟာ ရိုးသားတယ်။ ကြိုးစားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူမအလုပ်ရှင်ဟာ သူမကို ချစ်ရှာတယ်။ သူမအပေါ် အစစအရာအရာ နားလည်မှုပေးတယ်။ သူမဟာ လစဉ် ရလာတဲ့လခထဲမှ သူမအသုံးစရိတ်အတွက် စင်္ကာပူ ၅၀ ဒေါ်လာသာချန်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သူမ ခင်ပွန်းနှင့် သား၊သမီးတွေထံ လစဉ် ငွေပေးပို့နေသူတစ်ယောက်ပါ။
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု သက်သေခံပစ္စည်းမှာ မြန်မာနှစ်ဦး DNA မတွေ့ရ
၂၀၂၅ ခုတွင် ဖြစ်သည်။
လူထုဘဝကို လေ့လာချင်သော သမ္မတကြီးသည် ကိုယ်ရံတော်မပါ၊ လုံခြုံရေးမပါဘဲ၊ ကားတစ်စီး နှင့် ဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး ခရီးထွက်လာရာ ပြည်နယ်မြို့ကြီးတစ်မြို့သို့ ရောက်လာတယ်။
မြို့အနှံ့လေ့လာနေစဉ် သမ္မတကြီးက ဒရိုင်ဘာကို ပြောသည်... ....
"ငါလည်း ကားမမောင်းရတာကြာပြီ၊ မင်းလည်း ပင်ပန်းနေပြီ၊ ငါတစ်လှည့်မောင်းမယ်၊ မင်း နားလိုက်"
... ဆိုပြီး နေရာပြောင်းထိုင်ကြတယ်။
***လေယာဉ်မယ်လေးတွေ ဖော်ထုတ်သွားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် တစ်ချို့***
သိချင်စရာကောင်းပြီး သိထားရင်လည်း အကျိုးမယုတ်ပါဘူး။
၁။ လေယာဉ်မောင်းတဲ့သူ ၅၀ % က မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ အိပ်နေတာများတယ်တဲ့။ ၃ ပုံပုံ ၁ ပုံကတော့ အိပ်နေတဲ့ ကိုယ့်လေယာဉ်မောင်းဖော်ကို နှိုးဖို့ အိပ်နေရာကနေ ထကြတယ်တဲ့ဗျာ။ အိပ်နေတဲ့pilot မောင်းတဲ့ လေယာဉ် ဘယ်နှစ်ခေါက် စီးမိပြီလဲ မသိ။ (long trip တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်)
၂။ လေယာဉ် pilot ၂ ယောက်စားတဲ့ အစားအစာက မတူရပါဘူး။
ဗုဒ္ဓဝိနည်းတော် ၏ ကျောရိုး အယူအဆ။ ။ ‘ဒါမျိုး လုပ်လို့ရသလား’
ကျနော်သည် Goggle တွင် Sanghabeda offense ဟု စာရိုက်ရှာရာ ကမ္ဘာကြီး တခုလုံး၏ ပင့်ကူချည်မျှင်ကွန်ရက် www မှ အံကျလာသမျှထဲမှ ပထမဆုံး စာမျက်နှာသည် မိမိ ဟိုးအတော်ခပ်လှမ်းလှမ်း အချိန်ကာလကတည်းက ရေးသားခဲ့သော ပို့စ်တွေနှင့်ချည်း ပြည့်နှက်နေသည်ကို တွေ့ရလေသည်။ သတိပြုလိုက်မိသည်မှာ ဤအသည်းအသန် အရေးကြီးလှသော အကြောင်းအရာသည် အများသူငါ လူအများကြားတွင် မဆိုထားလင့်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပညာရှင်များကြားတွင်ပင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးချက် မရှိသေးသော နယ်ပယ်စိမ်းကြီး တခု ဖြစ်နေပါသည်။
အရေးကြီးဆုံး အချက်တချက်မှာ သံဃဘေဒကံကို နားလည်ဖို့ ဆိုလျှင် မြတ်စွာဘုရား၏ အာဘော်ကို နားလည်ဖမ်းမိနိုင်ဖို့ လိုသည်။ အဲသလို ဖမ်းမမိတတ် ဖြစ်ခဲ့ပါလျှင် မဘသအဖွဲ့ဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို မဆိုထားနှင့် ၄င်း မဘသကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်နေကြပါသည် ဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ကိုယ်တိုင်သည်ပင် တည်ကြည်လေးနက်မှု မရှိ၊ ပြဿနာကို ပိုမို ရူပ်ထွေးစေသော အပြောအဆို ဝါဒတို့ကို ဖြန့်ဖြူးလာတတ်ပါသည်။
မြေပုံအား ကပ်ထားလိုက်သည်။ ပြီးနောက် တပည့်များဖက်သို့လှည့်ကာ
ဆရာ။ ။ ကဲ..ငါ့တပည့်တို့ဒီမြန်မာ့မြေပုံကြီးကို မင်းတို့ 
မ ထင်မှတ်ပဲထိုးဆိုက်လာသည်ကို၊အပေါ်ထပ်ဝရန်တာဆီမှနေ၍၊ ကျွန်ုပ်တအံ့တသြငေးမော ကြည့်ရှုနေမိ၏။
အစိုးရဆိုတာ တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်ရင် ဖုန်သဲတွေကို မြေဆီသြဇာဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ရမယ်တဲ့။ ဒီစကားကို ပြောသွားတာ ပလေတိုဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ သိရတယ်။
ပြည်သူတွေကို အစိုးရကဖုန်မှုန့်တွေလို့ သဘောထားတယ်။ ကျောင်းသားတွေကို သဲတွေလို့ သူတို့ သဘော ထားတယ်။ သူတို့ကတော့ အပင်တွေပေါ့။
အစိုးရဆိုတဲ့သူတွေနဲ့ သမ္မတဆိုတဲ့သူတွေကို မေးကြည့်ချင်တာက ခင်ဗျားတို့ဟာ တိုက်မှာ ကပ်ပေါက် နေတဲ့ ကပ်ပါးပင်တွေလား၊ ဖုန်တွေ သဲတွေထဲမှာ ပေါက်နေတဲ့ အလေ့ကျပင်တွေလား။
ကပ်ပါးပင်တွေကတော့ အသက်ကြာကြာ မရှည်ဘူးဗျ။ ဖုန်သဲတွေထဲမှာ ဝင်နေတဲ့ အပင်တွေဆိုရင်လည်း မြေဆီသြဇာခမ်းရင် ခင်ဗျားတို့သေမှာ။
ဒါကြောင့် ဖုန်တွေသဲတွေကို မြေဆီသြဇာတွေဖြစ်အောင် ခင်ဗျားတို့ မလုပ်နိုင်ရင် ခင်ဗျားတို့လည်း အသက်ရှင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
Author: lubo601 | 8:42 PM | No မှတ်ချက် |
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဇေယျာသီရီ မြို့နယ် ဟောပြောပွဲမိန့်ခွန်း (ရုပ်/သံ)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရမည်းသင်းမြို့နယ် လူထုဟောပြောပွဲ မိန့်ခွန်း (ရုပ်/သံ)
ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တုန့်ပြန်
အငှားယာဉ်မောင်းအား လုယက်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးရမိ
​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​နှင့် ​ပ​လောင်​တပ်​ဖွဲ့​တို့ ​တိုက်​ပွဲ​များ ​ဆက်​တိုက်​ဖြစ်​ပွား​နေ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင် မှတ်ပုံတင်အခမဲ့ပြုလုပ်ပေးပြီး မဲဆွယ်နေမှု NLD ပါတီ ကန့်ကွက်
ဆီးရီးယားတွင် ရုရှားတပ်ဖွဲ့များ ပါဝင် တိုက်ခိုက်ခြင်း မရှိဟု ဆီးရီးယား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ပြောကြား
တရုတ် နိုင်ငံ “Chang Zheng – 6” သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဒုံးပျံ မှ တစ်ကြိမ်တည်းတွင် ဂြိုလ်တု အလုံးပေါင်း ၂၀ သယ်ဆောင် လွှတ်တင်ခြင်း ဖြင့် စံချိန်သစ် တင်နိုင်ခဲ့
​ကြာ​အင်း​ဆိပ်​ကြီး​မြို့​နယ်​ရှိ ​မွန်​ရွာ​ပေါင်း ၃၄ ​ရွာ ​မဲ​ပေး​ခွင့်​မ​ရှိ
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချပေးတဲ့သင်တန်းတစ်ခုမှာ နည်းပြက သင်တန်း သားတွေကို အစားအသောက်ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ပြောပြနေပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ စားသောက်နေ သမျှတွေက ကျွန်တော်တို့အသက်ကို ခြိမ်းခြောက်နေတာတွေ တစ်ပုံကြီးဗျ။ အသားစိမ်းစားတာ ကျန်းမာရေး အတွက်မကောင်းဘူး။ အသီးအရွက်တွေကလည်း စိတ်ချလို့မရ။
အုန်းနိူ. .......................၁ဗူး ( ၄၂၀ ဂရမ် )
ကင်ဆာရောဂါမှ အသက်ချမ်းသာရာရရှိခဲ့သူ အမျိုးသမီးမှ ထပ်ဆင့်ဝေမျှတဲ့ ကင်ဆာဆေးနည်း
Tam Keeto‎Friendzoned Myanmar
Bosnia and Herzegovina နိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်တယ်။ အခြားဝေဒနာရှင်တွေ အကျိုးဖြစ်စေဖို့ စိတ်အားထက်သန်တဲ့ သူမက သူမအား အသက်ချမ်းသာရစေခဲ့တဲ့ ဆေးနည်းကို ထပ်ဆင့် ဝေမျှခဲ့တယ်။ ဒီဝေဒနာ ရင် ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့ အခြားလူနာတွေ အကူညီပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
ယင်းဆေးနည်း ဖော်စပ်ဖို့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး ချင်းနဲ့ ပျားရည်ကိုသာ လိုအပ်ပါတယ်။
သေသူအတွက် ရည်စူးကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးရာတွင် မည်ကဲ့သို့ အကျိုးကျေးဇူးရှိမှု နှင့် မည်ကဲ့သို့ရည်စူး ကုသိုလ် ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသနည်း
Buddha, Dhamma, Sangha - ရတ်ပိပြကာ with Myo Chit Thwe and အရှင် ပညာ သိဒ္ဓိ
အရှင်ဘုရား သေဆုံးသူကို ရည်စူး၍ အလှူဒါနပြုလုပ်လျှင် ရည်စူးခံရသူ၌ မည်သို့သော အကျိုးကျေးဇူးများ ရနိုင်သည်ကို သိလိုပါသည်ဘုရား။
သေသူကိုပဲ ရည်စူးရည်စူး၊ ရှင်သူကိုပဲ ရည်စူးရည်စူး ကုသိုလ်ဆိုတာ ပြုသင့်ပါတယ်။
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များမှတစ်ပါး သတ္တ၀ါတစ်ဦးတစ်ယောက်သေဆုံးသွားရင် “လားရောက်ရမယ့်ဘ၀ ငါးမျိုး” ရှိပါတယ်။
ခင်မင်ရင်းနှီးသည့်၊ မိတ်ဆွေတချို့မှတဆင့်တတ်အားသမျှ စုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ပါသော်လည်း
ဖုန်း ဘက်ထရီအားကို ကြာရှည်ခံစေမယ့် နည်းလမ်း (၁၁) ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
သည် နွားတင်းကုတ်မှပြေးထွက်လာကာ တွေ့ရာမြင်ရာကို လိုက်ဝှေ့နေ၏ ။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းသားများလည်း ခြေဦးတည့်ရာကို ထွက်ပြေးကြရသည်။
ယခုတလော ပြည်တွင်းမှ ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းများက တို့ ဆေး များသုံး၍ လုရက်မှု-မုဒိန်းမှုခလေး ငယ်များအား တို့ ဆေးသုံးလျှက် ဖမ်းဆီးခံရသည့် သတင်းများ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် စာဖတ်သူများ ဗဟုသုတ ရရန်နှင့် သတိထားနိုင်စေဘို့တို့ ဆေး အကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
တို့ ဆေးဟု လူပြောများနေသော်လည်း အမှန်မှာ အထူးပြုလုပ်ထားသည့် အပ်အသေစားက လေးဖြင့် လူကိုယ်တွင်းသို့လျှက်တပျက် ထိုးသွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ခြင်းကိုက်သလို စစ်ကနဲ့ စူးရှနာကျင်သွားမည်၊
မနက် စောစောထခြင်းက ခေါင်းကြည်ပြီး အားလုံးအဆင်ပြေစေပါတယ်။
အောင်မြင်နေသူ တော်တော်များများဟာ မနက်စောစောထပြီး အလုပ်လုပ်တာရှိသလို၊ အားကစားလုပ်သူလဲရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် မနက် ၁၀ နာရီအထိ ဘာကိုလုပ်သင့်သလဲဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။
၀၁. ၁၀ မိနစ်ပဲ တရားထိုင်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာလေးမှာ သူများမသိစေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ လေးတွေရှိလို့ Passwords နဲ့ပိတ်ထားကာမှ အချိန်ကြာလာ သောအခါ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ နဲ့မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ ထိုအခါ ကိုယ့်အတတ်နဲ့ကိုယ် ကွိုင်တက်တော့တာပါဘဲဗျာ..။ ထိုအဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့နေရသူတွေအတွက်ကော ၊ Passwords ဖွင့်နည်းသိချင်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းလေးများဖြစ်နိုင်သလောက် ဖော်ပြပေး လိုက် ရပါတယ်..။
1. ကျနော့်ကို မိခင်က ဆယ်လလွယ်ပြီး ၁၁ လမှ မွေးခဲ့တယ်။
2. ကျနော့် နှလုံးသားက ညာဖက်မှာ။
3. ကျနော်က နာဂစ်ကနေ အသက်မသေဘဲ လွတ်မြှောက်လာသူ။
4. ကျနော်ဟာ ဘာသာစကား ၆ မျိုးကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောနိုင်သူ။
September 15, 2015 at 10:54pm Soe Min
တရားဥပဒေအရ လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကိုယ်သူနဲ့ သူ့အခွင့်အရေးတွေကို သူ့ဘာသာ ကာကွယ်နိုင်ပြီ လို့ ယူဆတဲ့ အသက်အရွယ်ကို ၁၈ နှစ်မှာ ထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူတစ်ယောက်ရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားကို အခြားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ စိုးမိုးခြယ်လှယ် ချုပ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိရပါဘူး။ ချွင်းခြက်တွေတော့ ရှိတာပေါ့။ စိတ်ပေါ့သွပ်နေသူ၊ သတိချို့ယွင်း လွတ်ကင်းနေသူ၊ အစရှိသည်ဖြင့်။ ကာယကံရှင် ဆန္ဒမပါရင် ဆရာဝန်တွေတောင် “ငါ နင့် အသက်ကိုကယ်နေတာ” ဆိုပြီး သူသဘောမတူတဲ့ ကုသမှုတွေ အတင်းအကျပ်ပေးလို့မရပါဘူး။ ကျွန်တစ်ယောက်ရဲ့ဆန္ဒကို သခင်မပိုင်ဘူး။ သားသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဆန္ဒကို မိဘမပိုင်ဘူး။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ဆန္ဒကို သူ့ဌာနအကြီးအကဲ မပိုင်ပါဘူး။ စစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ ဆန္ဒကို ကာချုပ်ကြီးမပိုင်ပါဘူး။ တိုင်းသူပြည်သားတစ်ယောက်ရဲ့ဆန္ဒကို သမ္မတကြီး မပိုင်ပါဘူး။
အခု ဒီစာကို ဖတ်နေချိန်မှာ စဉ်းစားကြည့်ရမှာက
် စုဆောင်းနိုင်ပြီလား၊ မစုဆောင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင် မမှန်သေးဘူး။
တစ်ခါတစ်လေ ခင်ဗျားတို့ တစ်တွေ မနက် အိပ်ယာကနိုးရင် ဘာ့ကြောင့် ရယ်မသိ စိတ်ဖိစီးနေတာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြလား။ တစ်စုံတစ်ခု က ခင်ဗျားတို့ကို ဖမ်းစား ထားသလို။ ပြည့်ကျပ် နေသလို စတဲ့ ခံစားချက် လေးတွေပေါ့။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ကို ပုံပြင် တစ်ခု ပြောပြ ချင်တယ်။ ပုံပြင် ဆိုတာထက် တကယ်က ရိုးရိုး ထောင်ချောက် တစ်ခု အကြောင်း ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းမှာ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော် တို့ ဖြစ်လေ့ ရှိတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု အတွက် အဖြေ ပါတယ်။
"မြန်မာပြည်တွင် ဘွဲ့လက်မှတ်မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံစာပေးနိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်း ရှိပါသလား။
"မြန်မာပြည်တွင် ဘွဲ့လက်မှတ်မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံစာပေးနိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်း ရှိပါသလား။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါက ကောင်းသည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်း စင်ကာပူရဲအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားပါက ၂ပတ်အတွင်း ရာဇဝတ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာပေးသည်။ ထိုစာရွက်ရှိမှာ အမေရိကားနှင့် နိုင်ငံတကာက အကျင့်စာရိတ္တကောင်းကြောင်း လက်ခံသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ကျပ် တစ်ထောင်ပေးပါက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းကြောင်း ထောက်ခံစာရသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန (သို့မဟုတ်) ရဲတပ်ဖွဲ့မှ နိုင်ငံတော်အဆင့် ထောက်ခံစာပေးနိုင်ဖို့ အများကြီးကြိုးစားရပါဦးမည်။ နိုင်ငံအကျိုးဆောင်မည်ဟု လိမ်ညာပြောဆိုနေသူများ ယခု ပြောင်းလဲနေကြပါပြီ။ အတုအယောင်များ သူ့ဖာသာ ဆင်းမသွားပါ။ ညင်သာစွာ ဖယ်ရှားရမည်။ သင့်မဲတစ်ပြားသည် အရေးကြီးလှပါသည်။"
2015-09-15 0:01 GMT+08:00 အေးငြိမ်း <phonemyatnyein@gmail.com>:
သားအမိနှစ်ဦး မိုးခိုနေစဉ် မိုးကြိုးပစ်ခံရ၍ သေဆုံး
ထုံးဘို-မြစ်ငယ်ဖြတ်လမ်းမှာ ယာဉ်တိမ်းမှောက်သဖြင့် ယာဉ်ပေါ်ပါ(၃)ဦး ရေနစ်သေဆုံး
နည်းပညာကြောင့် အကြမ်းဖက် အန္တရာယ် ပိုတိုးလာ
ချီလီမှာ ငလျင်လှုပ် ဆူနာမီဖြစ်
မြန်မာရဲ့ လမ်းမတော်တဆမှုက ဒုတိယ အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် ကို သတ်ဖြတ်ရန် ကြံစည်ခဲ့သူ ဆယ်ကျော်သက် တစ်ဦးကို အမေရိကန်အစိုးရ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့
ISIS အဖွဲ့၏ ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုပြီးနောက် သမီးဖြစ်သူက မိခင်ကိုဓားဖြင့်ထိုးမှု ဒိန်းမတ်တွင် ဖြစ်ပွား
သေသွားတဲ့မြွေက လာကြည့်တဲ့သူတွေကို ဝင်စီးတာ
ရေချိုး ပြန်လာစဉ် (၈)တန်း ကျောင်းသူတစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ
ဂျပန်ငါးဖမ်းသမား တစ်ဦး ဖူကူရှီးမား နျူကလီးယားစက်ရုံအနီးရှိ ပင်လယ်ပြင်မှ ဧရာမငါးကြီး တစ်ကောင်ဖမ်းမိ